Ukuba unobutsha kumoto ohamba ngesithuthuthu kodwa unobungakanani obunzima, obunzima, okanye obhekene nolwazi ngaphezu komgibeli wexesha lokuqala, uya kufuna ukukhangela Uhlobo lwe-Suzuki ka-2008. Ezinye ziphakamileyo zendawo yokuhlala, ezinye ziphezulu kakhulu, kodwa zonke zikhetho ezintle xa unamava amaninzi phantsi kwebhanti yakho kodwa ungakulungele ukuhamba ngebhayisikili.
Ukongezelela, zilapha ezinye zezihloko ezihlobene:
10 Iikhuphezi eziQala
2012 Suzuki DR 650 SE ($ 5,999)
I-Suzuki DR 650 SE i-single-cylinder, i-double-goal workhorse. Ukuphakama kwesihlalo sakhe esingama-intshi ezingama-34.8 kunganciphisa ukuya kuma-inch 33.0-esona sikhulu kakhulu kubagibeli abaninzi, kodwa kanye nakwikhaya kuloluhlu lwezithuthuthu eziqala phambili.
U-2011 Suzuki Lineup
2012 i-Kawasaki KLR650 (i-$ 6,299)
I-Kawasaki KLR650 yinqanaba elithembekileyo, elizamile kunye neyinyaniso eliye lajikeleza iminyaka engaphezu kwamashumi amabini; Ukuhlaziywa kutshanje kwenza ukuba kubekho okulungileyo, nangona ukuphakama kwesihlalo sakhe esingama-intshi ezingama-35 kunokude kubagibeli abaqalayo.
U-2011 WR250X ($ 6,590)
I-Yamaha WR250X yi- bike ye-supermoto leyo isisindo sokukhanya esinika imali enkulu, ngelixa injini yayo engama-250cc iphelele kubaqalayo.
Umdlalo we-Yamaha Yamaha.
2012 Honda XR650L ($ 6,690)
I-XR650L ye-Honda iyinqwelo-mabini enqabileyo eneenjongo ezinokuthenjwa, kunye ne-injini yelinye enye. Ukuphakama kwesikhundla sawo-intshi ezingama-37 kuphakamileyo, kodwa kubagijimi abade kakhulu, kwenza isithuthuthu esiphezulu esikhulu.
2012 i-Kawasaki Ninja 650 (i-$ 7,499)
I-Ninja 650 iyinxalenye enamandla ngakumbi ye- 250R kunye ne-500R kwaye ibonisa i-twin injini efana ne-flexible. Nangona le Ninja yenye yeemoto ezithandekayo kuloluhlu, kulula ukuyisebenzisa ibhayisiki ekwazi ukuthobela.
2012 BMW G 650 GS ($ 7,850)
Ifoto © BMW
I-BMW ye-R 1200 GS igubungela bonke ubuqaqawuli kunye ne-grand-bore-displacement kunye ne- globetrotting idumela , kodwa umntakwabo uG 650 GS ngokwenene wenza ibhayisiki ehamba phambili ngokugqithiseleyo kwi-injini-cylinder yayo, ukuphakama kwesitulo esingama-31.5, kunye nokufumaneka ukumiswa okwezantsi okwehla i-saddle ukuya kwi-intshi ezingama-30.3. Ngomxholo olungele ukwenziwa kwe-bike, jonga ngo- 2012 BMW G 650 GS Sertão.
2012 i-Kawasaki Versys (i-$ 7,899)
I-Kawasaki Versys ibhalwe ngegama elifanelekileyo, elinobuchule elinokuxhaswa ngebhayisikili elenza izinto ezihlukileyo. I-fuel fuel injected 649cc twine efana nayo inika amandla ngokukhawuleza ngokwaneleyo, kodwa esi sithuthuthu sibonakaliswa ngqiqo yayo.
2012 Suzuki V-Strom 650 ABS ($ 8,299) / V-Strom 650 ABS Adventure ($ 9,799)
Uthiwa ngegama elithi "Wee-Strom" kuba li-V-Strom elincinci elincinci, eli li-twin-power-driven bike liyintandokazi phakathi kwabagibeli be-adventure kuwo onke amanqanaba; ukuba uphendule i-version ye-saddlebag ene-saddlebag, ukhangele kwi-"Adventure".
2012 iDucati Monster 696 (i-$ 8,795)
Ifoto © Ducati
I-Ducatis idla ngokubiza kakhulu ukugcina ngaphezu kweebhayisikili ezininzi, kodwa ubuqu babo obuhlukile bubakhuthaza okuthabathayo phakathi kwabathandekayo. Nangona ibhekisana noKhuphiswano lwe- Monster 796 ABS , i-Monster 696 ihlawula i-dollar engama-9,000 kwaye inokuthi iyalwe ne-anti-lock lock.
I-Ducati Monster ka-2009 ye-2009
2012 Suzuki Boulevard C50T ($ 9,499)
I-Suzuki ye-Boulevard C50T i-cruiser inikezela nge-retro styling kunye ne-V-twin enezixhobo ezinokutyelela ezinjenge-windscreen ende, i-saddlebags kunye ne-backback.
Uhlobo lwe-Suzuki 2011.
Uhlaziyo olupheleleyo: 2008 Honda CBR1000RR
Fumana ukuba uluphi uhlobo lweInjini elona lungcono Ngaphambi kokukhetha i-ATV
2010 Ducati Multistrada 1200 Ukuhlaziywa
Indlela yokuthenga i-Quad entsha ye-ATV okanye i-4 Wheeler
I-Sporption ye-Absorption - I-Glossary Glossary
Uhlobo lweSizwe soLuntu lwaseLatino
Ukukhusela uLwandle kunye noPiliso
Indlela yokudibanisa "i-Croiser" (ukuya kuFold, Cross, Pass, Cut Cut)
3 Paranormal Ghost Hunting Apps ze-Android
Ukuguquka kweNtliziyo Yentliziyo
I-Speedometer Iingxaki kwiiVintage Automobiles
Ukulahleka: Indlela yokutshitshiswa kweNgxelo yokuBhubha kweBafana
Iingcebiso zokufundisa Isigama kwiBafundi abaneDyslexia
I-Beef Up Critical Thinking and Skills Writing: Ukulinganisa ii-Essays
6 Iingcebiso kunye neengcebiso zokulungelelanisa
Iimveliso zamahhala okanye ezithengiweyo zaseHlebhu zeFree
Iingoma eziphezulu zeLionel Richie
Iimoto ezikhawulezayo zehlabathi
Izibheno kunye neziNgqungquthela zabafundi beNgesi